Akhriso Qodabada Sharciga ah ee baarlamaanka dawlada xamar ku oogeen farmaajo | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Akhriso Qodabada Sharciga ah ee baarlamaanka dawlada xamar ku oogeen...
Akhriso Qodabada Sharciga ah ee baarlamaanka dawlada xamar ku oogeen farmaajo
Waxa ay iska noqotay arrin iska caadi ah siyaasadda Soomaalida in mooshin laga geeyo madaxda dowladda , kaas oo inta badan dhaliya qalalaase siyaasadeed.
Waxa ay u egtahay in markale bartanka looga jiro xiisad siyaasadeed tii ugu darneyd tan iyo intii xilka loo doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labo sano ka hor.
Haddaba 72 saacadood kadib markii mooshinka la keenay, waxaan halkan ku lafo gureynaa 5 qodob oo mooshinka laga fahmay.
Caadi ahaan madaxda ku lugta leh mooshinada si joogto ah ayay warbaahinta uga hadli jireen, waxayna cabbiri jireen aragtidooda ku wajahan waxa socda.
Balse guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal marnaba ma uusan ka hadlin mooshinka tan iyo intii uu saxiixay.
Dhawr jeer oo ay BBC-da isku dayday in ay kala xiriirto taleefoono kale duwan, ayaysan u suurtogalin in aan haleelno, maadaamaa aanan laga jawaabayn wicitaanada.
Marka kaliya ee la arkay guddoomiyaha waxa ay ahayd mar ay xildhibaanadii mooshinka keenay ugu tageen gurigiisa oo ku dhex yaala xeendaabka Villa Soomaaliya.
Wararkii ugu dambeeyay ee saakay soo baxaya waxa ay sheegayaan in guddoomiyaha uu ka guurey gurigiisii Villa Uganda ee ku dhex yiilay madaxtooyada, waxaana la sheegay in uu degay hoteel lagu tiriyo xildhibaanada mucaaradka. sida ay BBC-da u sheegeen xildhibaano ka ag dhow guddoomiyaha.
Lama oga cidda amnigiisa sugeysa, hase yeeshee ciidamada AMISOM ayaa u xilsaaran sugista amniga madaxda sarsare, waana in ay ku illaalisaa xarumaha dowladeed ee loo asteeyay madaxda. Weli wax war ah lagama hayo AMISOM iyo guddoomiyahaba.
Guddoomiyaha waxa ay dad badan ka rabeen in uu sharoxo mooshinka uu qabtay, gaar ahaan qodobada culculus ee loo cuskaday iyo sharcinimadiisa maadaamaa uu jiro sharci dhigaya in marka hore ay tahay in garsoorka ay ogolaadaan in eedeymaha madaxweynaha loo jeediyay ay wax ka jiraan.
Warqad uu horey usoo saaray guddoomiye Maxamed Mursal ayuu ku codsaday in la dhawro madax banaanida baarlamaanka, hase yeeshee waxaa lagu eedeeyay in laftiisa uu farogalin ku hayo laanta fulinta. Balse aamusnaanta guddoomiyaha ayaa meesha ka saartay fursadihii uu kaga jawaabi lahaa eedeymahaas.
Kaligiis ma ahan cidda aamusan, ee sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah qofka mooshinka laga keenay ayaa laftiisa aamusan, oo aanan weli ka hadlin mooshinka, isaga oo ay u egtahay in uu iska wato hawlihiisii caadiga ahaa xilli meel kasta oo dalka ka mid ah isaga la hadal hayo.
Waxaase la fahamsanyahay in madaxweynaha uu kullamo gaargaar ah la yeeshay madaxda qaarkeed tan iyo intii mooshinka la keenay sida ay illo xog ogaal ah u sheegeen BBC-da. Kullamada ayaa la sheegay in ay ku saabsanaayeen sidii xal looga gaari lahaa arrimaha mooshinka.
2-Xildhibaanada maka laaban karaan mooshinka ?
Xildhibaan Xassan Cabdi Ismaaciil oo ka mid ah kuwa keenay mooshinka ayaa BBC-da u sheegay in sharciga uu qabo in mar haddii uu xildhibaanka saxiixo mooshinka uusan ka laaban karin, wuxuuna intaas ku daray in mooshinka ay saxiixeen 92 xildhibaan oo ah guntankii la rabay ee uu sharciga qabay.
Balse Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow oo ka mid ah kuwa kasoo horjeeda mooshinka ayaa BBC-da u sheegay in qodobka uu cuskanayo xildhibaan Xassan uu sax yahay, balse markii koowaadba xildhibaanada qaar saxiixooda laga been abuurtay, sidaasi darteedna qof aanan saxiixin mooshinka uusan qodobkaas qabanaynin.
Xildhibaano badan ayaa sheegay in magacooda iyo saxiixooda laga been abuurtay, waxayna sheegeen in ay sharciga la tiigsan doonaan ciddii sidaas samaysay. Waxaa ka mid ah xildhibaanad ku sugan magaalada Dehli ee dalka Hindiya oo arrimo caafimaad u joogta, taas oo muuqaal ay soo duubtay ku sheegtay in laga been abuurtay saxiixeeda.
Waraaq uu shalay soo saaray xoghayaha guud ee baarlamaanka Cabdixakiim Buux ayuu ku sheegay in 14 xildhibaan ay usoo gudbiyeen cabasho ah in magacooda laga been abuurtay, sidaas darteedna uu ku jabay mooshinkii madaxweynaha laga geeyay.
Dowladihii hore, khilaafka waxa uu aad u saameyn jiray laanta fulinta dhexdooda, waxaana inta badan mooshinada laga keeni jiray xukuumadda, sababtuna waxa ay ahayd madaxwyenaha iyo Ra’isulwasaaraha oo is qabta.
Hadda khilaafka waxa uu usoo wareegay dhanka baarlamaanka, wuxuuna markii labaad khilaaf ka dhex taaganyahay guddoonka baarlamaanka oo ku kala aragti duwan mooshinka madaxweynaha ee uu guddoomiyaha saxiixay.
Guddoomiye ku xigeenka koowaad Cabdiwali Muudeey oo saxaafadda la hadlay ayaa yiri “Guddoomiyaha waxa uu mooshinka saxiixay isaga oo xanaaqsan, haka laabto ayaan leenahay”.
Xoghayaha baarlamaanka Cabdixakiim Buux ayaa warqad uu soo saaray ku sheegay in mooshinkii madaxweynaha uu jabay kadib markii 14 xildhibaan ay sheegeen in saxiixyadooda iyo magacyadooda laga been abuurtay.
Balse xildhibaanadii keenay ayaa weli ku adkaysanaya in mooshinka uu sax yahay, waxaana xaalka uga sii daraya guddoomiyaha baarlamaanka oo weli aamusan.
5-Awoodda xoghayaha Guud ee Baarlamaanka
Haddii uu jiro qof udub dhexaad u ah arrimaha mooshinka madaxweynaha, qofkaas waa Cabdikariim Buux oo ah xoghayaha guud ee baarlamaanka.
Maalinkii koowaad isaga ayuu ahaa qofkii saxiixay waraaqda mooshinka, inkasta oo inta bil furey, ku qoray ‘Amarka guddoomiyaha’, taas oo loo fasirtay in uu isaga fogeynayo wixii eedeymo ah.
48 saac kadib, Buux waxa uu soo saaray waraaq kale oo uu ku sheegayo in 14 xildhibaan ay sheegeen in laga been abuurtay, sidaasna uu ku jabay mooshinkii madaxweynaha.
Balse xildhibaano shalay hadlay ayaa sheegeen in xoghayaha uusan awood u lahayn in waraaq uusan guddoomiyaha ogeyn uusan soo qori karin, sidaas darteedna uu weli mooshinka sidiisii yahay.
Ma ahan markii koowaad oo Buux uu magaciisa miiska soo koro, mooshinkii kan ka horeeyay ee lagu ridey Prof Maxamed Cusmaan Jawaari, Buux shaqadiisa ayaa qiil qiil gashay kadib markii guddoomiye ku xigeenka Cabdiwali Muudeey uu waraaq uu soo saaray ku sheegay in uu xilka kaga qaaday xoghayaha. Balse markii dambe Buux shaqadiisa halkii ayuu ka watay.
Previous articleGabadh Soomaali ah oo doorasho kaga guuleysatay ganacsade caaan ah
Next articleWaryaa Muddo Kordhin Waa La Sameynayaa …” Gudoomiyaha Guurtida Somaliland